Ntuziaka maka iji Igwefoto Igwe - OMG Solutions
Ntuziaka maka kamera-Worn Cameras
Nchoputa a choro ichota ntuziaka maka ojiji igwe-eyi ndi aru-ya nile na ndi nnochite anya iwu. Emebere ya iji kwado ụlọ ọrụ mmanye iwu na-ewulite usoro na usoro iwu nke iji igwefoto eyi. Akwụkwọ ntụzịaka a metụtara ojiji igwefoto ahụ eyi na-eyi nke ọma maka ọha na eze na-agwa gị ka ekenyela ọha na eze.
Agbanyeghi ihe achọrọ n’okpuru iwu nchedo ozi nke onwe, iji igwe eji arụ ọrụ nwere ike imekọrịta ihe ndị ọzọ Iwu forlọ Ọrụ mmanye chọrọ ịma.
Iji maa atụ, Igwefoto yi n’ahu nwere ike ịdekọ ihe onyonyo onyonyo, ụda na mkparịta ụka nwere oke nke ịkpa ike. Yabụ, enwere ike nwekwuo nchegbu ma ọ bụrụ na iji igwefoto ahụ na-eyi ihe ọ bụla na-emetụta atụmanya ezi uche nke ọha na eze ma ọ bụ mejupụta nkwukọrịta nzuzo, gụnyere ebe enwere ike iru ndị otu. Ndị ọrụ nchekwa iwu kwesịkwara ịkpachara anya maka ihe ndị ọzọ metụtara iwu mgbe ọ bụla edekọtara ihe oyiyi na ụda na nzuzo, dị ka n'ụlọ ndị mmadụ ma ọ bụ n'ụgbọ ndị mmadụ.
Isi Wuru Kamera ahu na nzuzo:
Ndị ahụ na-eyi uwe ojii na-edekọ ngwaọrụ echepụtara ka eyikwasị ya na uwe ojii, nke nwere ike ịgụnye okpu agha ma ọ bụ iko. Ha na-eme ihe ngosi nke onye na-ahụ maka ihe omume ka ndị uwe ojii na-arụ ọrụ ha kwa ụbọchị. Ihe onyonyo di elu di elu na-enye ohere ka ndi mmadu hu ihe kwesiri ekwesi ma mekwaa ya na ndi nyocha ihe nlere, dika ihu ihu. Igwe okwu dị na-anabata nke ọma iji dekọ ọ bụghị naanị ụda ndị metụtara ọnọdụ a na-ezubere kamakwa ụda dị nro nwere ike ịgụnye mkparịta ụka nke ndị na-ekiri ya.
Teknụzụ Ara-Worn Cameras na-egosipụta mmụba dị ukwuu na nka site n'oge mmalite nke igwefoto echekwara mgbe a na-anabata usoro CCTV nke ukwuu ma nwee ike ịdekọ naanị ihe oyiyi ọ bụghị ụda. N'oge ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ nzuzo nzuzo ndị Canada nyere iwu ntụle vidiyo maka mpaghara ọha, nke na-amalite na njedebe nke akwụkwọ a. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ nzuzo dị mkpa banyere ikiri vidiyo ka yiri, a na-ahụkarị gburugburu ebe niile. Ka teknụzụ ndị a na-ahụ anya na-akọ, a na-achịkọta ozi onwe onye na-ebuwanye ibu (ma vidiyo ma ọdịyo) na ọnọdụ dịgasị iche iche (ma static na mkpanaka) yana etiti ga-ejikọ ya na ozi ndị ọzọ ọzọ (dịka nha ihu, metadata). O kwere omume na LEAs ga - eche na iji teknụzụ ọhụrụ enyere ha aka iji rụọ ọrụ ha. N'otu oge ahụ, teknụzụ BWC na-ebute nnabata siri ike maka ikike mmadụ nwere na nzuzo. Anyị kwenyere na ilebara ajụjụ nzuzo anya site na mmalite nwere ike ikwe ka mmejupụta kwesịrị ekwesị dị n'etiti mkpa nke mmanye iwu na ikike nzuzo nke ndị mmadụ.
Ahụ Anyị Nwa Cameras ga-abụ ezigbo ihe azịza maka arụmọrụ chọrọ achọpụtara? LEA kwesịrị ilebara anya na mgbochi nke teknụzụ. Ihe njiri mara nke ihe omume nwere ike ime site na igwefoto, ihe ndekọ ụda nwere ike ịbụ ezughi oke n'ihi oke nzụlite, ma ọ bụ njehie mmadụ nwere ike imebi uru ndekọ a ma belata arụmọrụ ha. Ọ bụrụ na a ga-eji ihe ndị e tinyere na teepu mee ihe dị ka ihe akaebe n'ihe ndị ụlọ ikpe, LEA kwesịrị iwere ihe ndị identifiedlọikpe chọtara maka ịnakwere ndekọ dị ka ihe akaebe yana usoro njikwa na njikwa echetara iji jide n'aka na afọ ojuju ihe ndị ahụ.
Na-enyo enyo, ojiji nke BWCs ga-eme ka mmadụ ghara inwe nzuzo n'ihi na ịdekọ mkparịta ụka na omume mmadụ na-ezisa ozi nzuzo. Dika odi, aghaghi ịkwụsịlata ihe nzuzo obula n’enweghi nsogbu ma obu uru site na uru. Site na iji teknụzụ ọhụụ, ọ nwere ike isi ike ịkọ ihe niile nke nsonaazụ ọma na nke ọjọọ na ntinye aka na-eme kwa ụbọchị yana ndị ọrụ obodo. A na-atụ aro ime ihe na-ahụ maka ịnya ụgbọelu ka ọ bụrụ ụzọ dị mma iji nyochaa mmetụta nzuzo nke Ara Worn Cameras banyere uru ha, tupu ha ekpebie ma hazie ma ọ bụ ịkwado ha, otu ha buru ibu, na ọnọdụ dị a .aa.
Nhọrọ ndị ọzọ:
Ntụle zuru oke bụ ma ịnwekarị ohere itinye aka na nzuzo ga-enweta otu ebumnuche. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe okwu azụmahịa maka mmemme igwefoto Ahụ-Worn, a ga-atụle usoro ndị pụrụ iche iji chọpụta ma ha nwere ike idozi ihe ndị achọrọ maka ịrụ ọrụ nke ọma na nsogbu na-adịghị mma na nzuzo. Obere ihe ngbasa ozi nzuzo bu nke kachasi nma.
Ntụle Mmetụta Nzuzo:
Dika ihe nlere anya di nma kachasi nma, ekwesiri inyocha ihe omimi ihe nzuzo (PIA) bu ihe eji eme aru Worn Cameras iji nyere aka gosiputa ihe nzuzo di egwu ndi ahu. PIA nwere ike dị oke ọnụ n'inyere LEAs aka iwepu ihe ize ndụ ndị ahụ ma ọ bụ wedata ya na ọkwa dị mma. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ichebara echiche ọzọ, dịka usoro na ọdịbendị ọdịbendị kwesịrị ịtụle na-ekpebi ma ị ga-eji BWCs rụọ ọrụ n'ọnọdụ ịkọwapụta. Ndị PIA kwesịrị iwepụta atụmatụ maka ịgụta ya ma mara mma na obodo ebe a ga-ebuga BWC.
Ndị ọrụ nchekwa iwu nwekwara ike ịchọ enyemaka nke ndị ọkachamara nzuzo tupu ịmeju mmemme Ahụ-Worn Cameras. Ndi okacha nzuzo nwere ike kpughari uzo eji aru aru nke aru-aru na aru oru iji jide n'aka na agbakoro na ojiji omuma nke mmadu iji kwado oru di n'okpuru iwu nzuzo.
Ekwesịrị ichebara ihe nzuzo ndị ọrụ. Ndị uwe ojii na-agba agba nwere ike iwe data nke ndị ọrụ mmanye iwu nke a na-eche nche n'okpuru ọtụtụ iwu nzuzo nke ọha. Ohere nwere ike ịdị n'otu gụnyere ịdekọ igwefoto Ara-Worn iji kwado nyocha arụmọrụ onye ọrụ. Ndị ọrụ nwekwara ike ịnwe ikike nzuzo n'okpuru iwu ndị ọzọ yana nkwekọrịta mkpokọta nke nwere ike imetụta mmemme BWC.
Ọ bụrụ na-echebara ihe ndekọ a maka ọrụ ọ bụla ndị ọzọ na ebumnuche mmemme kamẹra-Worn, maka ọmụmaatụ, nlele arụmọrụ, ọzụzụ ndị ọrụ, ma ọ bụ nyocha, ebumnuche ndị a dị mkpa ka enyocha iji hụ na irube isi na iwu kwesịrị ekwesị, na ndị ọrụ kwesịrị ịkọrọ ha nke ọma. Nke ọma, ekwesịrị idobe akara iji kpaa mmetụta nzuzo, dị ka imesia ihu na ihe ọ bụla e ji mara ya na iwepu ndekọ na ọdịnaya nwere mmetụta.
Gọọmenti na Akaụntụ:
Ntọala maka ibubata BWC, tinyere mkpa ọrụ na ebumnuche mmemme.
Ndị isi ụlọ omebe iwu maka ịchịkọta ozi nkeonwe n'okpuru mmemme ahụ.
Ọrụ na ọrụ nke ndị ọrụ gbasara Nkume-Worn Cameras na ihe ndekọ ha.
Etubere ihe edere maka ịgbanye ma gbanye ma gbanye BWCs dịka o kwesiri.
Nwepụta maka ntuziaka na ọzụzụ dị njikere maka ndị ọrụ iji jide n'aka na ndị ọrụ mara ihe nzuzo nzuzo nke Body-Worn Cameras ma mara ọrụ ha n'okpuru usoro iwu na usoro ndị a.
Ndị na-eche nche nzuzo maka ndị ọrụ ozi nke ara-Worn Cameras weghaara ozi nke onwe ya.
Itinye n'ọrụ maka ijide n'aka na agbadobere ụkpụrụ igwe na usoro igwefoto Ahụ-onbụ nwanyị, yana ịza ajụjụ niile dị n'isi ndị otu ahụ.
Ọnụ ego nke ịkwanyereghị ụkpụrụ na usoro dị iche iche ùgwù.
Ikike nke onye obula. Ekwesiri ime ka ndi mmadu mara na ha nwere ikike ime mkpesa na aru ndi mmadu nke nzuzo banyere ndi oru mmanye iwu banyere oru banyere ndekọ nke na-ejide ozi nkeonwe iji kpebie ma emegidere iwu nzuzo.
Ọrụ nke nkwekọrịta ọ bụla n'etiti genlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu na ndị na-eweta ọrụ atọ na-achọpụta na ndekọ ndekọ dị n'okpuru njikwa nke Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ Iwu ma nọrọ n'okpuru iwu nzuzo dị mma.
Iwu maka nyochacha nke ime nke mmemme Igwefoto Ahụ-Worn iji lebara nnabata na usoro, iwu na iwu nzuzo enwere. Nyocha ahụ kwesịrị inwe nyocha nke ma igwefoto igwe na-ekiri igwe na-elegide anya maka ebumnuche ekwuputara mmemme ahụ.
Na ikike na iwu PIA, ntinye maka PIA oge ọ bụla enwere nnukwu mgbanwe na mmemme ahụ.
Aha na kọntaktị ozi nke onye nwere ike ịza ajụjụ ndị sitere na ọha na eze.
Iji na Ngosi nke Ndekọ:
Ọnọdụ nke enwere ike ilele ndekọ. Ikiri kwesịrị ịdị naanị na ntọala achọrọ ịma. Ọ bụrụ na enweghị obi abụọ ọ bụla na ihe iwu akwadoghị mere na enweghị ebubo mwepu omume, ekwesighi ile ihe ndekọ.
Ebumnuche nke a ga-eji mee ndekọ a na ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla na-amachi, dịka ọmụmaatụ, na-ewepụ ọdịnaya nwere mmetụta na ndekọ a na-eji ebumnuche ọzụzụ.
Amachibido ikike iji vidiyo na nchịkọta ọdịyo.
Ọnọdụ nke enwere ike ikpughere ọha ihe ndekọ a ma ọ bụrụ na ọ ga -egosipụta ụdị mkpughe ọ bụla. Iji maa atụ, ihu na njirimara akara ndị ọzọ kwesịrị imechu ihu na ụda ga-agbagọ ebe ọ bụla enwere ike.
Ọnọdụ ebe enwere ike kpughee ihe ndekọ na mpụga nke nzukọ ahụ, dịka, nye ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ na nyocha dị egwu, ma ọ bụ ndị nnọchi anya iwu dịka akụkụ nke mmepe nchọpụta ụlọ ikpe.
Na nchikota, igwefoto ndi ahu putara bu ihe bara oke uru ya na ihe nile o siri mee, o bughi na edekọ okwu na omume mmadu, ya na ndi mmadu ndi ozo n’ime otutu ihe idere, tinyere ndi ezi na ulo, ndi n’ile anya, ndi enyi, ndi enyo enyo. na ndị o metụtara. Ndekọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu site na iji igwefoto ndị ahụ eyi n'ahụ na-ebuli ihe egwu dị mkpa na nzuzo nke onwe, a ga-enyefe Alọ Ọrụ Ndị Iwu Iwu na ịbuga Body-Worn Cameras n'ogo na n'ụzọ na-echebe ma kwanyere ọha na eze na ndị ọrụ ùgwù. ikike nkeonwe nzuzo.
Nzuzo 5603 1 Echiche Taa